Aqalka Sare oo Dhexdhexaadinaya Dowladda Federaalka iyo Maamul Goboleedyada | SAHAN ONLINE
Aqalka Sare oo Dhexdhexaadinaya Dowladda Federaalka iyo Maamul Goboleedyada
MUQDISHO- Xubnaha aqalka sare ee Barlamaanka federaalka ayaa qoraal ay soo saareen maanta waxay ku sheegeen in go’aansadeedn in wufuud u kala diraan caasimadaha maamul goboleedyada dalka si ay warbixino dhab ah uga keenaan si xal looga gaaro khilaafka iyo ismaandhaafka hadda ka dhex taagan labada dhinac.
Guddiga joogtada e aqalka sare wuxuu baaq u diray dhammaan dhinacyada ku lugta leh abaabulka Mooshinada ka dhanka ah madaxda maamul goboleedyada inay deg deg u joojiyaan, iyagoo fursad siinaya dadaalka Xal doonka ah ee aqalka Sare.
Khilaafka u dhexeeyaa Dowladda federaalka iyo Maamul goboleedyada ayaa cirka isku shareeray iyoadoo Shalay oo ay ugu dambeysay maamulada Puntland iyo koonfur galbeed ayaa war ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in gabi ahaanba ay hakiyeen wada shaqeyntii hay’adahooda ay la lahaayeen dowlada federaalka soomaaliya.
Sidoo kale, Maamul goboleedyada ayaan weli ka joojin Casuumadii uu fidiyay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ahaa in Caasimadda Muqdisho la isugu yimaado 18 bishan Septerber si xal looga gaaro ismaandhaafka ka dhex taagan.
Halkan ka Akhriso Qoraalka Aqalka Sare